ကြှနျမ ရငျထဲမှာလဲ ဆကျထုံးတှမြေားလာတဲ့အခါ – Shinyoon
အမှားတဈခုကို ခှငျ့လှတျလိုကျရငျတောငျ အရငျလို ပွနျပွီး ယုံကွညျလို့မရတော့ဘူးဆိုတာ သိတယျမလား
ကွိုးလေးတဈခြောငျး ပကျြသှားပွီးမှ ပွနျပွီး ဆကျထားသလိုပါပဲ ဘယျလောကျပဲ ခိုငျပါတယျပွောပွော ဆကျထုံးလေးတော့ ရှိသငျ့သလောကျရှိပါတယျ ကွိုးတဈခြောငျးရဲ့ဆကျထုံးက ဘာမှ မပွောပွပမေယျ့ ရငျဘတျထဲက ဖွဈတဲ့ ဆကျထုံးလေးက တဈသကျလုံး အဖုအထဈတှအေဖွဈ ကနျြရှိနတေတျတယျ
ယုံကွညျခငျြပမေယျ့ ယုံကွညျ့လို့ မရတော့တာမြိုး ဘယျလောကျပဲကွိုးစားကွိုးစာ အရငျလို့စိတျပွနျပွီး ထားလို့မရသလိုမြိုးပေါ့ တိုကျဆိုငျတာတှေ ရှိလာတဲ့အခါတိုငျးမှာလဲ ပွနျပွီး အဲ့ဒီရငျဘတျထဲက အဖုအထဈလေးတှကေ တဈဆဈဆဈနဲ့ ပွနျပွီးနာရပါတယျ ။
အမှားတဈခုကို လှယျလှယျလေး ခှငျ့လှတျလိုကျဖို့လှယျပမေယျ့ အဲ့ဒီအမှားကို မပေ့ဈလိုကျဖို့ကြ ခကျခဲတတျတယျလေ ကိုယျတဈယောကျတညျးမှမဟုတျပါဘူး ဒါ လူတိုငျးနီးပါး ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိကွတာမြိုးပါ အဖုအထဈတှမြေားလာတာနဲ့အမြှ ဆကျဆံရတာ အဆငျမပွတေော့ဘူး
အရငျပွနျပွီး ယုံကွညျဖို့ ဘယျလောကျပဲကွိုးစားကွိုးစား ယုံကွညျလို့ မရခဲ့ဘူး ဒါ ကြှနျမ အပွဈရယျလို့လဲ မဟုတျပါဘူး ကြှနျမအပျေါ မထောကျမထားပဲ မှားခဲ့တာတှကွေောငျ့ ယုံကွညျခငျြတာတောငျ ယုံကွညျဖို့ မလှယျတော့ဘူးဒါကွောငျ့ . . . လူတဈယောကျကို ခဈြရငျ ဒဏျရာတှေ ခဏခဏမပေးနဲ့
အမှားတှေ ခဏခဏ မလုပျနဲ့ ရငျဘတျထဲမှာ ဆကျထုံးတှမြေားသှားတဲ့အခါ အရငျလိုပွနျဖွဈခငျြလို့လဲ အရငျအတိုငျး ဘယျနညျးနဲ့မှ ပွနျမဖွဈနိုငျတော့ဘူး ဆကျထုံး . . . ကွိုးတဈခြောငျးမှာတောငျ ဆကျထုံးတှပေါလာရငျ မခိုငျနိုငျဘူးလို့ ထငျတတျကွတာမြိုးလေ
ကြှနျမ ရငျထဲမှာလဲ ဆကျထုံးတှမြေားလာတဲ့အခါ ဘယျလိုအငျအားမြိုးနဲ့ ဆကျပွီး ယုံကွညျဝံ့ပါ့မလဲ ။
အမှားတစ်ခုကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ရင်တောင် အရင်လို ပြန်ပြီး ယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာ သိတယ်မလား
ကြိုးလေးတစ်ချောင်း ပျက်သွားပြီးမှ ပြန်ပြီး ဆက်ထားသလိုပါပဲ ဘယ်လောက်ပဲ ခိုင်ပါတယ်ပြောပြော ဆက်ထုံးလေးတော့ ရှိသင့်သလောက်ရှိပါတယ် ကြိုးတစ်ချောင်းရဲ့ဆက်ထုံးက ဘာမှ မပြောပြပေမယ့် ရင်ဘတ်ထဲက ဖြစ်တဲ့ ဆက်ထုံးလေးက တစ်သက်လုံး အဖုအထစ်တွေအဖြစ် ကျန်ရှိနေတတ်တယ်
ယုံကြည်ချင်ပေမယ့် ယုံကြည့်လို့ မရတော့တာမျိုး ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစာ အရင်လို့စိတ်ပြန်ပြီး ထားလို့မရသလိုမျိုးပေါ့ တိုက်ဆိုင်တာတွေ ရှိလာတဲ့အခါတိုင်းမှာလဲ ပြန်ပြီး အဲ့ဒီရင်ဘတ်ထဲက အဖုအထစ်လေးတွေက တစ်ဆစ်ဆစ်နဲ့ ပြန်ပြီးနာရပါတယ် ။
အမှားတစ်ခုကို လွယ်လွယ်လေး ခွင့်လွှတ်လိုက်ဖို့လွယ်ပေမယ့် အဲ့ဒီအမှားကို မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ကျ ခက်ခဲတတ်တယ်လေ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမှမဟုတ်ပါဘူး ဒါ လူတိုင်းနီးပါး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိကြတာမျိုးပါ အဖုအထစ်တွေများလာတာနဲ့အမျှ ဆက်ဆံရတာ အဆင်မပြေတော့ဘူး
အရင်ပြန်ပြီး ယုံကြည်ဖို့ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစား ယုံကြည်လို့ မရခဲ့ဘူး ဒါ ကျွန်မ အပြစ်ရယ်လို့လဲ မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်မအပေါ် မထောက်မထားပဲ မှားခဲ့တာတွေကြောင့် ယုံကြည်ချင်တာတောင် ယုံကြည်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့် . . . လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ရင် ဒဏ်ရာတွေ ခဏခဏမပေးနဲ့
အမှားတွေ ခဏခဏ မလုပ်နဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဆက်ထုံးတွေများသွားတဲ့အခါ အရင်လိုပြန်ဖြစ်ချင်လို့လဲ အရင်အတိုင်း ဘယ်နည်းနဲ့မှ ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ဆက်ထုံး . . . ကြိုးတစ်ချောင်းမှာတောင် ဆက်ထုံးတွေပါလာရင် မခိုင်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တတ်ကြတာမျိုးလေ
ကျွန်မ ရင်ထဲမှာလဲ ဆက်ထုံးတွေများလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုအင်အားမျိုးနဲ့ ဆက်ပြီး ယုံကြည်ဝံ့ပါ့မလဲ ။
မှေးဖှားလာတဲ့ကံ မကောငျးခငျြနပေါ အိုဇာတာတော့ ကောငျးခငျြတယျ
ကြှနျမတှယျတာတတျတဲ့အကငျြ့ကို ဖြောကျပဈမှ ရတော့မယျ